काठमाडाैं | साउन ९, २०७८
मानव शरीरमा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद र मात्सर्य ६ वटा गुण हुन्छन् । भागवतमा व्यासजीले यसलाई षड् रिपु वा शत्रु भनेका छन् ।
भागवत पञ्चमस्कन्धको जडभरत तथा रहुगण राजाबीचको संवादमा यसको सुन्दर विवेचन भएको छ । अनावश्यक कुरामा लागेर दुःख दिने अर्थमा शत्रु भनिएको हो तर यिनले प्रयोग गर्न नजान्दा मात्र दुःख दिने हुन् ।
प्रयोग गर्न जानेको खण्डमा जीवन ऊर्जा बनेर उन्नति र प्रगतिमा सघाउने गर्छन् । त्यसैले यसलाई शत्रु भन्नुभन्दा गुण भन्नु उपयोगी देखिएको छ । यस आलेखमा यिनै ६ वटा गुणमध्ये मात्सर्यबारे केही प्रकाश पार्ने प्रयास गरिएको छ ।
मात्सर्यको सोझो अर्थ ईर्ष्या हो । यो पनि जीवन ऊर्जाकै अंग हो । यो सबैसँग हुन्छ । सँगै आएको छ, सँगै बसेको छ, सँगै जानेछ । यसलार्ई तपाईं चाहेर पनि हटाउन सक्नुहुन्न तर रूपान्तरण गर्न भने सक्नुहुन्छ । रूपान्तरण गर्न सिक्नुभयो भने सुख पाउनुहुनेछ । होइन भने दुःख पाउनु हुनेछ ।
अब प्रश्न उठ्न सक्छ रूपान्तरण गर्ने कसरी ? तर यो पनि खासै अप्ठ्यारो काम होइन । कसैको ईर्ष्या गर्नु दुरुपयोग हो । उसले गरेको कामको ईर्ष्या गर्नु सदुपयोग हो । रूपान्तरण भनेकै यही हो । ईर्ष्या गर्नुपर्छ । नगर्नुस् भन्ने होइन तर ईर्ष्या कुनै व्यक्तिको होइन, विषयको गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म हामीले यसतर्फ ध्यान दिएका थिएनौं । त्यसैले दुःख पाएका थियौं । जब त्यस्तो बानी बसाउन थाल्छौं, स्वतः सुख पाउने छौं । अब आयो विषयप्रति ईर्ष्या गर्ने भनेको के हो र कसरी गर्ने भन्ने कुरा । आउनुस् केही व्यावहारिक उदाहरणबाट बुझ्ने प्रयास गरौं ।
मानिलिनुस् तपाईंलाई धनी, मानी वा ठूलो मानिस बन्न मन लागेको छ । पहिलो को जस्तो हुने निर्क्यौल गर्नुस् । पात्र जो पनि हुन सक्छ । खेलाडी पनि हुन सक्छ, पर्वतारोही पनि हुन सक्छ । उद्योगपति, व्यापारी पनि हुन सक्छ । साहित्यकार वा संगीतकार पनि हुन सक्छ । समाजसेवी वा बुद्धिजीवी पनि हुन सक्छ ।
मन्त्रालयको हाकिम पनि हुन सक्छ । मन्त्री वा कुनै नेता पनि हुनसक्छ । पहिले तपाईंको स्वभाव कस्तो छ, रुचि कस्तो छ । को जस्तो बन्दा उपयोगी हुन्छ त्यसबारे मनन गर्नुस् । आफ्नो रुचि अनुसारको पात्र छनोट गर्नुस् ।
अनि त्यस्तै बन्ने प्रयास गर्नुस् तर उनको ईर्ष्या चाहिँ नगर्नुस् । उनले गरेको कामको ईर्ष्या गर्न थाल्नुस् । यति गर्नुस् कि धेरै नै गर्नुहोस् । यो भनेको उनको उन्नति प्रगति देखेर जल्ने होइन । उनको काम हेरेर चल्ने हो, उनले गरेका काम र संघर्षको ईर्ष्या गर्ने हो । उनी माथि पुगेका छन् भने म किन सक्दिनँ भन्नुस् । उनले त्यहाँ पुग्न के–के गरे, के कस्तो संघर्ष गरे त्यसलाई पत्ता लगाउनुस् र आफैं पनि त्यस्तै गर्ने प्रयास गर्नुस् ।
काम ठूलो–सानो भन्ने हुँदैन । जुन कामबाट पनि चाहेको अवस्थामा पुग्न सकिन्छ । मानिलिनुस् तपाईं कृषक हुनुहुन्छ । तपाईंसँगैका अर्का कृषकले प्रगति गरेका छन् । तपाईंले गर्न सक्नुभएको छैन । हुन सक्छ तपाईं व्यापारी हुनुहुन्छ । अथवा उद्योगपति पनि हुन सक्नुहुन्छ । अरुको प्रगति भएको छ । तपाईंको भएको छैन । त्यतिबेला के गर्नुहुन्छ ? खुइय गर्नुहुन्छ । छट्पटिनुहुन्छ । यही होइन ? ठीक छ त्यतिसम्म गर्र्नुस् तर उसको ईर्ष्या चाहिँ नगर्नुस् । उसले गरेको काम र तरिकाको गर्नुस् । एकदिन तपाईं पनि अवश्य त्यहाँ पुग्न सक्नुहुन्छ ।
हरेक क्षेत्रमा यही नियम लागू हुन्छ । जबसम्म तपाईं व्यक्तिको ईर्ष्या गर्नुहुन्छ केही पनि गर्न सक्नुहुन्न तर व्यक्ति छाडेर उसले गरेको कामको ईर्ष्या गर्न थाल्नुहुन्छ, त्यसपछि एउटा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको सिलसिला शुरू हुन्छ । तपाईंको पनि प्रगति हुन्छ । तपाईंले ईर्ष्या गर्नुभएको व्यक्तिको पनि हुन थाल्छ । तपाईंले उनको कामको ईर्ष्या गर्नुभयो, उनले तपाईंको कामको ईर्ष्या गरे । फलतः दुवैको उन्नति र प्रगति भयो ।
यही नै ईर्ष्या ऊर्जा रूपान्तरणको चमत्कार हो । अनि यही नै व्यासजीले भनेको मात्सर्य नामक शत्रुलाई गुणमा परिणत गरेर सुख पाउने तरिका हो ।